यी दिशामा रहेर पढे फेल हुने चान्स नै छैन, यसरी वास्तु मिलाए पेसा, व्यवसायमापनि अपार लाभ - Nepali in Australia
यी दिशामा रहेर पढे फेल हुने चान्स नै छैन, यसरी वास्तु मिलाए पेसा, व्यवसायमापनि अपार लाभ
May 28, 2021 autherLeaveaComment on यी दिशामा रहेर पढे फेल हुने चान्स नै छैन, यसरी वास्तु मिलाए पेसा, व्यवसायमापनि अपार लाभ
काठमाडौं । विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि सफल व्यक्तित्वको निर्माण गर्न, वास्तु अनुसार घर वा अफिस हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो बिना, व्यक्तित्व सही दिशा र सही वेगमा विकास गर्न सकिदैँन् ।
यदि बच्चाहरूको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने पनि बच्चाहरूको शिक्षित अभिभावक अध्ययनको लागि सही दिशा रोज्न चाहन्छन् । भनिन्छ कि अध्ययन कोठामा गलत्त दिशमातर्फ फर्केर पढाई गर्दा विद्यार्थीको मनमा धेरै नकारात्मक विचारहरु आउँछन् ।
फलस्वरुप विद्यार्थीले चाहेको शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दैन् । वास्तुशास्त्रका अनुसार केही दिशाहरू त्यस्ता हुन्छन्, जसले गर्दा अध्ययन गर्ने व्यक्तिमा मानसिक तनाव र डिप्रेसन बढ्न थाल्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा, यो जान्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि कुन दिशामा बसेर विद्यार्थीले अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ ? आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ । विद्यार्थीहरुका लागि पूर्व, उत्तर वा उत्तर–पूर्व दिशा एकदम शुभ मानिन्छ । किनभने यस दिशातर्फ मुख गर्दा ध्यान, शान्ति र अध्ययनमा एकाग्रताको लागि राम्रो हुन्छ ।
सकारात्मक उर्जाको प्रभाव पनि यस दिशामा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । त्यसकारण के कुरा ध्यानमा राख्नुहोस् भने तपाईंको अध्ययन कोठा यी दिशाहरूमा हुनुपर्दछ । अध्ययन गर्ने क्रममा अनुहार पूर्व वा उत्तर दिशातर्फ फर्केको हुनुपर्दछ । यी दिशाहरु मानसिक कार्य, रचनात्मकता र अभ्यासको लागि उत्तम हुन्छ ।
वास्तुशास्त्रका अनुसार बच्चाहरूको कोठामा राखिएको अध्ययन तालिका पूर्व वा उत्तर दिशामा हुनुपर्दछ । साथै, पढ्ने क्रममा अनुहार पूर्व वा उत्तर तिर हुनुपर्छ । यसो गर्नाले धेरै सकारात्मक ऊर्जा दिने केन्द्रको प्राप्ति हुन्छ । त्यसै भएर यो कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनुहोला ।
फेङ्गशुई वास्तुका अनुसार बच्चाहरूको अध्ययन टेबुलमा शिक्षा टावर राख्नुपर्दछ । यसरी उनीहरूले अध्ययनमा ध्यान दिनुका साथै आफ्नो तार्किक तर्क सुधार गर्न सक्षम हुन्छन् । यो तरिकाले तपाईंको बच्चालाई बहसमा उत्कृष्ट बन्न सहयोग पुग्दछ ।
नेपालमा लोकसेवा आयोगका लागि तयारी गर्नेहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दैछ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि पनि अध्ययन जरुरी छ । उत्तर दिशा रोजगारी पाउनको लागि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि उत्तम स्थान हो । रोचक कुरा के भने पश्चिम दिशा बच्चाहरूको अध्ययनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
सकियो कोरोनाको डरःदोश्रो लहर चलिरहेका बेला कोरोना अन्त्य बारे भर्खरै who ले दियो यस्तो खुसिको खबर !
भ्वाइस अफ नेपालका जज दीप श्रेष्ठलाई एक्का’सी यो के आइलाग्यो ! अस्पताल’मा गरियो भ’र्ना
६४ वर्षका यी व्यक्ति १० वर्षअघि सुनामीमा हराएकी श्रीमतीलाई अहिलेसम्म समुद्रको गहिराइमा खोजिरहेछन्
March 13, 2021 auther